Dhallaanka sawirada aad telefoon kula abaalmarintan ku guuleystay editor photo. afaysto, ka saar indhaha cas, dalagga & toosi, yaynaan, geliso goo'go sawiro kale, rinjiga, dhigi sayrin midab ka mid ah sawirada madow iyo caddaan, ku dar qoraalka, buufinta erayga, codsan saamaynta sida Hab-Cross, Lomo, Vignette, faux HDR, Janjeeri-wareeg, qalin sawir, iyo wax ka badan.
Taageerada xalinta sare sixiddiisa in 13MP qalabka in ay xamili karaan. Tani had iyo jeer waa app ugu horeysay ee aan ku rakibi on qalab cusub. Waxaa fiican ee salaysayn khalkhalgelinta photo app halkaas. sameeysa ayaa had iyo jeer jawaabay in weydiimo. Waxaad samayn kartaa goobooyin fikirka horey u.
Sidoo kale inay galaan khadadka kala duwan ee qoraalka. Dooro “horyaalka”, ku qor text qaar ka mid ah. kadibna riix “soo laabtay”. Ku qor qoraalka more qaar ka mid ah. Horayba, line labaad ee qoraalka u muuqataa hoos ugu horeysay ee. Just-saxaafadeed “Return” ka dib line kasta. Waxa kale oo aad la qabsato kara xajmiga oo ka mid ah meel line. Dhab ahaan la mid ah sida laga bilaabo cutubka cusub ee editor qoraal kasta. Eeg? app labaad ugu fiicnaa ee waqtiga oo dhan.
Haddii aad rabto in aad barnaamijka weyn tafatirka taasi fudud oo si sahlan loo isticmaali, heli app this. Waxaan MARNA iibsan apps laakiin waxaan soo iibsaday this mid ka mid ah ka dib markii ay isku dayayaan version xorta ah oo stinks, daacad ah. version The bixisay waa laga cabsado!! Waxaa la bixiyaa isu jeer a million ka badan in photos weyn oo badan oo qosloba, sidoo kale. lacag hal mar, xayeysiis no, waxa kaliya $3.99 oo qiimihiisu beesadda kasta.
Afterglow Photo Filter Pro 1.0 Waayo, Mac Torrent
Xooggan oo DS Emulator APK Pro
Hore BA Financial Calculator Pro 2.0 Waayo, Mac Torrent
NextDeyn Cash 1.0.2 Waayo, Mac Torrent